भूकम्प पीडितले थप एक लाख पाउने हल्ला मात्र, ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता अलपत्र ! – Makalukhabar.com
भूकम्प पीडितले थप एक लाख पाउने हल्ला मात्र, ६५ वर्षमै वृद्ध भत्ता अलपत्र !
“काठमाडौं, चैत १९ । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई थप १ लाख अनुदान दिने निर्णय गरेको भनेर झुट बोलेको खुलेको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले पनि भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम थप गर्ने विषयमा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
देउवा सरकारले गरेको ६५ वर्ष पुगेको जेष्ठ नागरिकले वृद्धभत्ता पाउने निर्णय पनि कार्यान्वयन नहुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार तत्कालीन सरकारले कार्यविधि नबनाएको र अहिलेको सरकारले त्यसको स्वामित्व नलिएपछि निर्णय अलपत्र परेको हो ।”